ETHIOPIAN Airlines oo 41 sano kaddib billaabeysa duullimaadkii Soomaaliya. – Xeernews24
ETHIOPIAN Airlines oo 41 sano kaddib billaabeysa duullimaadkii Soomaaliya.
15. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Duullimaadkan oo noqon doona mid ganacsi (Commerical Flights) ayaa sidda ay war baahintu xog hoose ku heshay ay diyaaradda Itoobiya toddobaadka dambe ku imaan doontaa garoonka caalamiga ah ee magaalada Xamar Aadan Cadde.
Diyaaradda Itoobiya waxa ay saddex maalin toddobaadkii isaga kala gooshi doontaa Addis Ababa iyo Muqdisgo sidda uu sheegay Xuseen Xoosh oo ah maamulaha diyaaradda.
Soomaaliya waxaa ay joojisay duullimaadyadii ganacsi ee isaga kala gooshi jiray Muqdisho iyo Addis Ababa markii uu qarxay dagaalkii 1977 ee ay labada dal foodda isugu dareen dagaalkii Soomaali Galbeed.
Diyaaradda Itoobiya sidoo kale waxa ay Soomaalida u fududeyn doontaa safarashada ay wadamada kale ku tagayaan.
Hadda, safarleyda Soomaalida waxa ay ku xidhan yihiin diyaaradda Turkish Airline iyo duulimaadyada Nairobi si ay ugu gudbaan Europe iyo waqooyiga America.
“Go’aankan ayaa yimi kaddib markii ay ganacsata Soomaaliyeed ka codsadeen dowladda Itoobiya,” ayaa Xoosh laga soo xigtay.
2015kii, Diyaarad laga leeyahay Itoobiya ayaa duullimaadyo ka bilowday maamul gobolleedka Soomaaliyeed sidda Somaliland iyo Puntland.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/Ethiopian-airline.jpg 156 323 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-15 12:44:332018-08-15 12:44:33ETHIOPIAN Airlines oo 41 sano kaddib billaabeysa duullimaadkii Soomaaliya.
Nin Somali ah oo qirtay dilkii loogu gaystay Diridhaba qoyska reer Djibouti... Itoobiya oo ka hadashay waxaa laga damacsan yahay Liyuu Booliiskii Cabdi Il...